SteelConnect, ilay gadget voafaritra ho an'ny Apple Pencil | Vaovao IPhone
Rehefa natombok'i Apple ny penina fikasohany, nantsoina hoe Apple Pencil, tamin'ny hafanam-pony tamin'ny volana septambra lasa teo, dia tsy nahita antsipirihany iray tena lehibe izy io: aiza no tokony hapetraka ilay fitaovana rehefa tsy ampiasaina. Izany no antony nahatonga ny orinasa iray natokana ho an'ny famolavolana kojakoja ho an'ny famantaranandro marani-tsaina nahatratra ny lakilen'ny raharaha ary namolavola ny Gadget Azo antoka fa afaka manana toerana handaoana ny Apple Pencil rehefa tsy ampiasainay.
Ny Quarter, izany no anaran'ny orinasa resahinay, dia namorona sy namorona gadget iray izay manome vahaolana amin'ity kely ity nefa, miaraka amin'izay koa, olana lehibe. Ny vahaolana natombony dia antsoina hoe SteelConnect ary penina izay mifandray amin'ny iPad Pro, hahafahantsika mametraka azy ao ny Apple Pencil antsika, ampiasao azy ho Dock hitazomana ny penina amin'ny toerana tokony hisy azy ary hialana amin'ny fahaverezan'ny pointer antsika mandritra ny famoahana azy any an-kafa.
Ny mpampiasa Apple dia zatra ny orinasa monina any Cupertino manolotra antsika vokatra voadinika sy feno fiheverana tanteraka, fa ny fampidirana stylus hampiasaina amin'ny iPad Pro dia midika fiatoana amin'ity hevitra ity Very mora foana ny pensilihazo ary tsy nieritreritra Apple, rehefa nandefa azy io, ny vahaolana tena mahomby hametrahana ny Apple Pencil miaraka amin'ny iPad rehefa mifindra isika. Mba hanatsarana ny raharaha, ny Apple Pencil vaovao, izay miaraka amin'ny iPad Pro raha tadiavintsika izany, dia handoa antsika $ 99 tsy azo iadian-kevitra. Ahoana no tsy nieritreretan'i Apple ny fisorohana ny fahaverezan'ny fitaovana lafo vidy?
Mikasa ny handefa ny SteelConnect vaovao manodidina ny volana desambra ny orinasa. Izy io dia mifanentana tanteraka amin'ny takelaka Apple sy ny charger azy koa, satria izy io dia hifandray mivantana amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny SteelConnect.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » SteelConnect, ilay gadget farany ho an'ny Apple Pencil
Afaka mandanjalanja zavatra isika amin'ny alàlan'ny 3D Touch an'ny iPhone 6s
FireCore dia mamoaka ny Seas0nPass 0.9.7 ho an'ny Apple TV 2G 6.2.1